Maydadka Askarta Kenyaanka oo caawa la geynayo Nairobi. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Maydadka Askarta Kenyaanka oo caawa la geynayo Nairobi.
On Jan 18, 2016 Last updated Jan 18, 2016
Haweeneyda Wasiirka Gaashaandhigga ka ah dalka Kenya, Raychelle Omamo ayaa sheegtay in Qeybta Koowaad ee Maydadka Askarta Kenya caawa laga soo dejin doono Garoonka Wilson Airport ee magaalladda Nairobi.
Hadalkaasi ayey jeedisay, kadib, markii ay maanta Garoonka Wilson ku qaabishay Ku-dhawaad 30 Askari oo ka badbaaday Weerarkii Alshabaab Jimcihii hore ku qaadeen Saldhig ay Askarta Kenya ku lahaayeen Deegaanka Ceel-cadde ee Gobalka Gedo.
Ma aysan sheegin tirada maydadka la keeni doono iyo halka laga soo qaadayo, iyadoo ay Ciiddamo badan oo Kenyaan ah hawlgal ka wadaan duleedka Ceel-cadde, si ay u helaan Askar nool ama maydadka Askartii lagu dilay Duullaankii Jimcihii la soo dhaafay.
Waxay sheegtay in Askarta maanta laga soo dejiyey Wilson Airport inaysan dhaawacnayn. Balse ay anfariirsan yihiin ama argagaxsan yihiin, waa sida ay hadalka u tiri.
Qaar ka mid ah Askarta maanta laga dejiyey Garoonka Wilson Airport ayaa watay hubkooda, iyagoo garaarsanaa ama laalaadinayey Qoryaha Fudud ee AK 47 iyo Faalka.
Dhinaca kale, Raychelle Omamo waxay sheegtay in Ciiddamo badan loo diray Gobalka Gedo, si ay u qaadaan Hawlgal lagu baadi-goobayo, laguna badbaadinayo Askarta lagu la’ yahay Weerarkii Ceel-cadde.
Ugu dambeyntii, waxay sheegtay in tiradda Askarta Kenyanka ee lagu dilay Weerarkii Alshabaab la shaacin doono marka la soo af-jaro Hawlgalka haatan socdo.
Xarakadda Alshabaab waxay sheegtay inay dileen ilaa 100-Askar Kenyaan ah, isla markaana ay 12 kale nolol ku qabteen.
Webmaster 16343 posts 0 comments
Ku-dhawaad 100 Muwaadiniin British oo ay ku jiraan Somali oo lagu dilay Syria iyo Iraq.
(WARBIXIN):- Alshabaab oo gacanta ku dhigay Taliyihii Ciiddanka Kenya ee Saldhigga Ceel-cadde iyo Saraakiil kale.